Microsoft Surface Neo dia takelaka takelaka roa ho an'ny 2020 | Famoronana an-tserasera
Raha resaka fitaovana aforitra dia afaka gaga isika ny efijery roa an'ny takelaka Microsoft vaovao ary izay nantsoiny hoe Surface Neo.
Fitaovana lehibe nahagaga ho an'ny mponina sy ny olon-tsy fantatra noho ny hakanton'ny endrika ary noho ny famokarany. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia miresaka momba ny fananana efijery roa azo ampidirina hamorona takelaka lehibe kokoa isika, na azontsika atao ny mitazona ny tsirairay amin'izy ireo arak'izay ilaintsika.
Fantatr'i Microsoft fa manana soavaly mandresy amin'ny Surface izy ireo, ka andao hanomboka manitatra ny elanelana ahatongavana amin'ny karazana mpampiasa sy filàna rehetra. Tena mahasarika ny takelaka vaovao azo ahodina ao amin'i Microsoft.
Ny Surface Neo dia takelaka azo soloina efijery roa izay miavaka amin'ny fananana Surface Pen Ao aoriana. Izy io dia misy klavie magnetika mihorona ary koa ny trackpad ka tsy misy zavatra tsy ampy amin'ity fitaovana vaovao ity.
Ka io dia manana izay rehetra mety ho tadiavintsika ao anaty takelaka. Izany dia hatevin'ny 5,6 milimetatra, izay mahasoa an'i Apple amin'ny toerana maharary azy, ary misy ny efijery LCD manify indrindra noforonina. Milanja 655 grama ary misy hinge 360 ​​degre, manantena izahay fa ampy ho azy ny fikirakirana ny raharaha andavanandronao amin'ireo karazana fitaovana ireo.
A ambonin'ny Neo izay ao ny rindrambaiko dia manana Windows 10X, ilay OS vaovao namboarina manokana ho an'ny fitaovana roa. Izy io koa dia ahitana ny chip Intel, ny Lakefield miaraka amina vahaolana miaraka amin'ny sary faha-XNUMX.
Raha ny momba ny efijery dia ahitana efijery roa 9 santimetatra izy ary miaraka amin'ny endri-javatra lehibe ampifanarahan'ireo fampiharana ireo amin'ny alàlan'ny efijery roa. ny manana efijery roa eny an-tananay Midika izany fa afaka manana ny fampiharana sary amin'ny tanana iray isika, raha manana ny tambajotra sosialy kosa amin'ny iray hafa. Eritrereto fotsiny ny mety hisian'ny streaming sy karazana asa hafa.
Tsy fantatray ny vidiny, eny hilatsaka amin'ny taona 2020 ho avy io. Fantatsika, mbola toa ela be io, saingy azo antoka fa mendrika ny fiandrasana. Microsoft iray nohavaozina tanteraka izay toa vaovao kokoa noho ny taona vitsivitsy lasa izay; na dia miaraka amin'ireo hevitra ireo aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Microsoft dia manolotra ny Surface Neo, takelaka misy takelaka roa izay toa tsara
Fairphone 3, telefaona maharitra